Shirka barayaasha afka hooyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay onsdag 31 oktober 2007 kl 15.32
Axmed Faarax, Örebro
Sannadkii 1998 ayaa markii ugu horreysey la qabtey kulan ey yeeshaan macallimiin/bareyaal soomaaliyeed oo dhigta luuqadda hooyo kuna kala dhaqan waddammada loo yaqaan Nordic-ga ama dhaca waqooyiga Yurub. Kulankaasina wuxuu ka dhacey waagaasi degmada Flen.
Macallimiin kor u dhaafeysa toddobaatameeyo oo ka kala socotey saddexda dal ee Iswiidhen, Noorweey iyo Finland, ayaa muddo saddex maalmood ah kulan sannadeedkoodii uu maalintii Sabtida taariikhduna aheyd 27-ka Oktoobar ugu soo gabagabooyey tuulada Klacka-Lerberg, ee degmada Nora oo toddobaatan Kiilomitir baaxad gaareysa u jirta degmada Örebro ee magaala madaxda gobolka Nerke.
Axmed Qaasin, waxaa lagu naaneysaa Baxnaan. Wuxuu muddo toddoba sannadood ah ku howl-gelayey howl ah macallin dhiga luuqadda hooyo ee soomaaliga kana howlgala degmada Örebro.
Baxnaan ayaa sida uu noo sheegey howsha macallinnimo aaney aheyn mid ku cusub, islamarkaana uu horey muddo laba sannadood ah dalka soomaaliya uga soo shaqeeyey macalin dhiga maadooyinka xisaabta iyo ingiriisiga. Hase yeeshee maadadan luuqaddu ey ku noqotey mid cusub ee aannu waayoaragnimo u laheyn.
Kulankii macallimiinta ee sannadkan oo degmada Örebro nasiib u yeelatey iney qaban qaabiso ayuu Baxnaan ahaa xiriiriyaha kulankaasi muddadii uu socdey. Iyadoona kulankaa lagu qabtey meel geeri go’an, ayuu baxnaan noo sheegey iney aheyd mid xisaabta ugu jirtey reer Örebro sidii loo xakameyn lahaa macallimiinta ee aaney marnaba suurtagal ugu helin iney iska yaacaan oo magaalada dhinacooda ka galaan, inta ey socoto doodaha la xiriira hoowshii halkaasi loogu talagaley fulinteeda Ajandaha sannadka ee bareyaasha.
Maalintii Khamiista oo ku beegneyd furitaanka kulankaa, ayey kala soo qeyb galeen marti sharaf ka kala socotey, heyadda horumarinta iskuulaadka, jaamicadda Göteborg oo sannadka foodda innagu soo haya laga hirgelin doono barashada luuqadda iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo saraakiil ka socotey degmada Örebro iyo gobolka Nerke.
Kullankii saddexda maalmood socdey ee ey yeesheen barayaasha luuqadda hooyo ka dhiga waddammada Iswiidhen iyo Noorweey, waxaa iyaguna ka dhex muuqdey macallimiin ka socotey dalkaasi Finland.
Halkaasina ku soo bandhigtey, ajandihii ugu ballaarnaa ee looga doodayey kulankaa. Lana xiriirey manhaj waxbarasho oo ey ka siman yihiin saddexda dal.
Jaamac Gaabuush, wuxuu ka mid ahaa macallimiinta luuqadda hooyo ka dhigta magaalada Helsinki ee dalka Finland. Wuxuuna ka mid ahaa macallimiintii soo bandhigtey manhajka cusub ee bareyaashu ka doodayeen.
Soo bandhigidda macallimiinta ka socotey dalka Finland ee dhanka manhajka kadib ayey macallimiintii goob joogga ka aheyd isu qeybiyeen kooxo, iney bal ka doodaan sidey amuurtaa suurtagal u noqon laheyd, ama loo hirgelin lahaa.
Xubnaha ka soo qeyb galey kulankaa waxaa ka mid ahaa Bare, Xassan Xaaji Yaaxiin oo ka socdey dalka Noorweey, islamarkaana ka mid ahaa macallimiintii goobtaasi ka hadashey islamarkaana soo bandhigtey sida ey waxbarashada dalka Noorwey u socoto iyo arrimmo kaleettaba.
Badankood ayey macallimiintu aad ugu riyaaqeen, in leysugu geeyo meel geeri go’an ah. Taasina suurtagal uga dhigtey iney isu helaan wakhti xitaa wixii ka dambeeyey xilliyada ey siminaarradu socdeen, halkaasina isku madadaalinayeen sidey isku weydaarsan lahaayeen aqoonta iyo waayoaragnimadooda.
Sidoo kale waxaa isaguna warbixin goobtaasi ka bixiyey guddiga macallimiinta ee u xilsaaran abaabulka iyo bogga waxbarashada ee internetka, laguna magacaabo Tema Modersmål.
Cumar Aaden Cumar, waa macallin ka howlgala magaalada Umeå ee waqooyiga Iswiidhen. Guddiga macallimiintana u qaabilsan dhanka farsamada ee bogga aaladda Internetka, isaga oo soo bandhigayey qaar ka mid ah hoowlihii ey ku soo kordhiyeen wixii ka dambeeyey muddadii sannadka ahaa ee la kala maqnaa, ayaa goobtaa ka sheegey iney qoreen buug ku daabacan aaladda elektroonikada ee Internet looguna talagaley manhajka ardeyda dhigata luuqadda hooyo ee dugsiyada sare. Waxaadmna ka daalacan kareysaa bogga www.waxbarasho.com